ပင်မစာမျက်နှာ / မီးဖိုချောင် faucets / Pot Filler မီးဖိုချောင် Faucets Stow Chrome အထက် / WOWOW Pot Filler Faucet
အမေဇုံကိုအမေရိကန် Amazon MX တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန် PDF
ခေါက်နိုင်သော၊ ဆွဲဆန့်နိုင်သော အိုးဖြည့် faucet- အိုးဖြည့် faucet တွင် အဆစ်နှစ်ထပ်၊ လွှဲလက်တံနှင့် လက်ကိုင် ၂ ခု၊ အပေါက်တစ်ခု၊ လုပ်ငန်းသုံး မီးဖိုချောင်သုံး faucet ကို အသုံးမပြုသည့်အခါတွင် လမ်းလွဲ၍ ခေါက်နိုင်သည်၊ ချက်ပြုတ်ရာတွင် ထိရောက်ပြီး နေရာချွေတာပါသည်။
Chrome finish- လက်ရာမြောက်သော chrome နံရံကပ်မီးဖိုချောင်သုံး faucet၊ တိုက်စားမှုကင်းပြီး သံချေးမရှိ၊ ရောင်ပြန်ဟပ်ပြီး တောက်ပြောင်သော မျက်နှာပြင်၊ သုတ်ရုံဖြင့် သန့်စင်နိုင်သည်
အစိုင်အခဲ ကြေးအိုးဖြည့်ပစ္စည်း- အထူးခဲ-မပါသော စစ်ထုတ်ခြင်းနည်းပညာဖြင့် သိပ်သည်းဆ မြင့်မားသော ကြေးဝါအား စံနှုန်းဖြင့် အာမခံပါသည်။
Neoperl လေအေးပေးစက်- တည်ငြိမ်သောဖိအားနှင့် ဖြောင့်စင်းသောရေစီးကြောင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ ဖိအားမြင့် ABS လေလွင့်မှုနည်းသော၊ အစက်အပြောက်ကင်းပြီး ယိုစိမ့်မှုဒဏ်ကို ပေးစွမ်းသည်။
အာမခံ၊ ဖောက်သည် ပံ့ပိုးမှု-5နှစ် အာမခံချက်နှင့် အချိန်မီ ဖောက်သည် ပံ့ပိုးမှုကို ကမ်းလှမ်းထားသည်။ ရက်ပေါင်း 90 အကန့်အသတ်ဖြင့် ပြန်ပေးသည်။ သင်၏အမိန့်မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ မှတ်ချက်- အိုးဖြည့်ပစ္စည်း၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် အသုံးမပြုသည့်အခါ နံရံအနီးရှိ faucet လက်ကိုင်ကို ပိတ်ပါ။
2311200C ကိုထိပုတ်ပါ Chrome အိုးဖြည့်ပါ
သင်၏အသစ်စက်စက်မီးဖိုချောင်အသစ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါ၎င်းကိုအစမှအစဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရန်သင်လိုချင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုစဉ်းစားနိုင်သည်။ မီးဖိုချောင်သည်မိသားစုအများစုအတွက်သင်အိမ်၌ရှိစဉ်သင်၏အချိန်အများစုကိုအသုံးပြုသောနေရာဖြစ်သည်။ သင်နှင့်သင့်မိသားစုအတွက်သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်ဆန္ဒအားလုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်အိပ်မက်မီးဖိုချောင်ကိုပိုကောင်းအောင်ဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ သင်မီးဖိုချောင်ကိုအစ မှနေ၍ ဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါအလွန်ကောင်းသည်မှာသင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်မျှမရှိပါ။ ကောင်းပြီ, ဘတ်ဂျက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရှိ။ များသောအားဖြင့်သင်သည်သင်၏အိပ်မက်ဆိုးမီးဖိုချောင်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲပြီးစျေးနှင့်သင့်ဘတ်ဂျက်အပေါ် မူတည်၍ ပစ္စည်းများကိုသင်စတင်ပြုပြင်သည်
သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်အတွက် fit ။ မေးခွန်းကသင်၏ဘတ်ဂျက်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်ဖြစ်သည်။ သင့်အတွက်အရေးအကြီးဆုံးသောပစ္စည်းများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းမပြုလိုပါ။ သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်၏ပစ္စည်းများနှင့်ချောနှင့်ပတ်သက်။ စျေးနှုန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ အခြားနည်းလမ်းများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုများကိုသင်ကြည့်သောအခါ၎င်းတို့သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သတိမမူမိကြပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်စမတ်ကျစွာကုန်ကျစရိတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဘူး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်သင်၏အရေးကြီးသောမီးဖိုချောင်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏အရည်အသွေးအပေါ်အလျှော့ပေးလိုက်လျောသင့်ပါဘူး။ ထိုအခါအဆုံး၌စျေးပေါစျေးကြီးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဘူး။ ၎င်းကိုအချိန်တိုင်းရှောင်ရှားသင့်သည်။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောငွေကိုပေးနိုင်သောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအားသင်သာရှာရမည်။ WOWOW ကဒီပေးသွင်းသူပါ!
အိုးဖြည့်စွက်ခွက်တစ်ခွက်သည်သင်၏မီးဖိုချောင်တွင်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏မီးဖိုချောင်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ လူအများအပြားတွင်ဤကဲ့သို့သောမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများမရှိသောကြောင့်အသုံးပြုမှုသည်ကျယ်ပြန့်စွာမရောက်သေးပါ။ သို့သော်၎င်းသည်သင်၏မီးဖိုချောင်တွင်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးရှိပြီးရေဖြည့်အိုးကဲ့သို့သောလေးလံသောပစ္စည်းများသယ်ဆောင်ရန်သင့်အားရှောင်ရှားသည်။ WOWOW ၏ chrome အိုးဖြည့်စွက်အသာပုတ်ခြင်းဖြင့်သင်၏အိုးများကိုသူတို့မီးဖိုပေါ်တွင်ရှိနေစဉ်ရေနှင့်ဖြည့်နိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်အိုးများကိုမီးဖိုချောင်ထဲမှရေကိုပြုတ်။ မီးဖိုပေါ်သို့သယ်ဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အထူးသဖြင့်သင်အားနည်းနေတဲ့လက်တွေ၊ လက်မောင်းတွေရှိရင်ဒါမှမဟုတ်အားနည်းနေရင်ဒီ chrome အိုးဖြည့်တာဟာသင့်ဘဝကိုပိုပြီးလွယ်ကူစေပါတယ်။
မီးဖိုပေါ်၌ရှိနေစဉ်ခရိုအိုးခွက်ကိုအသာပုတ်။ ရေအိုးများကိုဖြည့်နိုင်သည်။ မီးပြီးနေပြီလား၊ မီးဖိုပြုတ်ပြီးချက်ပြုတ်နေတဲ့အိုးတွေရှိလား။ Chrome အိုးကိုအသာပုတ်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောသတ္တုများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်အပူကိုအလွယ်တကူခံနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤခရုမ်းအိုးကိုအသာပုတ်ခြင်းသည်အလွန်အသုံးဝင်ပြီးသင့်မီးဖိုချောင်တွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရာဖြစ်သည်။
ပိုက်ဆံ chrome အိုးဖြည့်စွက်ကိုအသာပုတ်ပါတန်ဖိုး
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း WOWOW သည်စျေးကွက်တွင်သင်ရရှိနိုင်သောငွေအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးကိုပေးသည်။ ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ chrome pot filling tap ဟာ A-brand တစ်ခုနဲ့ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီးအရည်အသွေးလည်းပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချနိုင်ခြင်း။ A- အမှတ်တံဆိပ် chrome အိုးအဆာပုတ်များ၏စျေးနှုန်းများသည်သုံးဆသို့မဟုတ် ပို၍ စျေးကြီးနိုင်သည်။ ဤစျေးနှုန်းများသည်လုံးဝမလိုအပ်ကြောင်း WOWOW ကထပ်ခါထပ်ခါပြသသည်။ ထို့ကြောင့် WOWOW သည်ဤ chrome အိုးအသာပုတ်ခြင်းဖြင့်သင်ငွေအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးကိုပေးသည်။ လုံးဝယုံမှားစရာမရှိ!
WOWOW ၏ chrome အိုးဖြည့်စွတ်ခလုတ်၏အရည်အသွေးသည်မခက်ခဲပါ။ WOWOW သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောသံမဏိပစ္စည်းများနှင့်အရည်အသွေးမြင့် chrome finish များအသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးကိုသင်ချက်ချင်းသတိပြုမိသည်။ အလေးချိန် ၆၀ အောင်စထက်နည်းသောအလေးချိန်ဖြင့်သင်က၎င်းကိုအစိုင်အခဲသတ္တုများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်ဟုသင်ခံစားရသည်။ ဒီခရုမ်းအိုးကိုအသာပုတ်ထားသောအသာပုတ်ခြင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အပြင်ဤခရုမ်းအိုးအဆာကိုအသာပုတ်ခြင်း၏အခက်အခဲကင်းသောလုပ်ဆောင်မှုမှသင်လည်းအကျိုးရရှိနိုင်ပါသည်။ Chrome အိုးကိုအသာပုတ်။ Neoperl aerator တပ်ဆင်ထားသည်။ ဤသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖိအားများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ရေစီးဆင်းမှုကိုပေးစွမ်းသည်။ လေယာဉ်ပျံသည်အကွာအဝေးမကျဘဲအာမခံချက်နှင့်ယိုစိမ့်မှုနှင့်ယိုစိမ့်မှုကင်းသောရေအတွေ့အကြုံများကိုရရှိသည်။
ဒီ chrome အိုးဖြည့်စွက်အသာပုတ်ချက်သည်သင်၏မီးဖိုချောင်နှင့်သက်ဆိုင်သောနေရာများအတွက်လိုအပ်သောနေရာများကိုယူရန်ပညာရှိစွာပုံစံပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီဆန့်ထုတ်ထားသောခရိုအိုးအဆာကိုအသာပုတ်။ သင်ကမီးဖိုနောက်ကွယ်ရှိနံရံကိုအလွယ်တကူသိမ်းထားနိုင်သည်။ Chrome အိုးဖြည့်စွက်အသာပုတ်ခြင်းတွင်နှစ်ဖက်လှည့်နိုင်သောလက်မောင်းတစ်ခုရှိသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၎င်းကိုအနည်းငယ်မျှသာသိုလှောင်ထားနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်လုံးဝဆန့်တန်းသွားသောအခါကြာရှည်စွာရောက်ရှိနိုင်သည်။ ၎င်း၏အမြင့်ဆုံးနံရံသည် ၂၄ လက်မအထိရှိပြီးသင့်မီးဖိုချောင်မီးဖို၏ထောင့်တိုင်းသို့ရောက်နိုင်သည်။
လက်ကိုင်နှစ်ချောင်းဖြင့်သင်ခလုတ်ကိုအသာပုတ်။ လွယ်ကူစွာမလည်ပတ်ဘဲအလွယ်တကူလည်ပတ်နိုင်သည်။ အချို့လူများကဤအသာပုတ်ခြင်းမျိုးကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်၎င်းသည်အပိုလုံခြုံမှုပေးသည်။ စုပ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ရေဖိတ်ထားသောရေသည်မီးဖိုပေါ်သို့ယိုစိမ့်ထွက်သွားနိုင်သည်။ သင်သည်ဤ chrome အိုးဖြည့်စွက်ခလုတ်ကိုနံရံအနီးရှိမာစတာအဆို့ရှင်ဖြင့်ပိတ်နိုင်သည်။ ထိုအခါသင်က spout မှာအဆို့ရှင်နှင့်အတူအဖြစ်ကောင်းစွာကပိတ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်တည်ငြိမ်သောစီးဆင်းမှုကိုအာမခံသည်။ ဤနှစ်ဆကာကွယ်မှုသည်အမြင့်ဆုံးလုံခြုံရေးကိုပေးသည်။ သင် chrome အိုးကိုအသာပုတ်။ သုံးပါက master valve ကိုဖွင့်ပြီးအခြားမီးဖိုချောင်သုံးကဲ့သို့သောဤ chrome အိုးဖြည့်တိပ်ကိုသုံးပါ။
စတိုင်ကျသော chrome ပြီးသောကြောင့်ဤမီးဖိုချောင်သုံးဖိုင်ပုတ်သည်သင်၏မီးဖိုချောင်၏စတိုင်အပြင်အခြားအရာများစွာကိုလည်းပါ ၀ င်သည်။ ဤအရာသည်သင်၏အိုးအသာပုတ်ခြင်းတွင်ရောင်ပြန်ဟပ်။ တောက်ပသောဖုံးအုပ်မှုဖြစ်သည်။ သံမဏိကိုယ်ထည် ၃၀၄ ကိုယ်ထည်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောဤခရုမ်းအိုးအသာပုတ်ခြင်းသည်သင်၏မီးဖိုချောင်ပုံစံကိုသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ထို့အပြင်ဤခရိုအိုးအပြည့်ထည့်သွင်းမှုသည်ချေးမဟုတ်သောကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကြော့ရှင်းပြီးလှပသည်။ အချည်းနှီးမဖြစ်ဘဲ WOWOW သည်ဤခရိုအိုးအပြည့်ကိုအသာပုတ်ပါက ၅ နှစ်အာမခံသက်တမ်းကိုပေးပါမည်။ ဤအချက်သည် WOWOW သည် ၄ ​​င်း၏ထုတ်ကုန်နှင့်သင်နှင့်အတူသင်ရရှိသောငွေတန်ဖိုးအတွက်ယုံကြည်မှုရှိကြောင်းသက်သေပြသည်။ အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခရုမ်းအိုးကိုအသာပုတ်ခြင်း၏ကောင်းကျိုးများ -
•အရည်အသွေးမြင့်မားသော chrome finish နှင့်ခေတ်မီဒီဇိုင်း
SKU: ၂၃၂၀၃၀၀C Categories: မီးဖိုချောင် faucets, Pot Filler မီးဖိုချောင် Faucets Tags: ခရုမ်းအပြီးသတ်, မီးဖိုချောင်ရေကန်, မြို့ရိုးအတောင်ကို
1.71 ကီလိုဂရမ် = 3.7699 ပေါ = 60.3185 အောင်စ
15.5 x ကို 9.7 x ကို 2.1 လက်မ
ခေါက် /2လက်ကိုင် / လွှဲလက်
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ စားသောက်ဆိုင်၊ လူနေအိမ်၊ အိမ်၊ မီးဖိုချောင်၊